Wararka - Koonfurta Ameerika (Brazil) Waxyaabaha ay ka kooban yihiin Cunnada Caalamiga ah waxay muujinayaan 2019
Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd waxay kaqeyb qaadatay Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cuntada Koonfurta Ameerika 2019 laga bilaabo Ogosto 20-22, 2019 magaalada Sao Paulo, Brazil. Maadaama aan ka mid nahay suuqyada cusub, waxaan u dhoofinay macmiilkeena macaamiisha Koonfurta Ameerika, kuwaas oo naftooda u huray hilibka iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Waxaan si tartiib tartiib ah ugu qaybinay Brazil iyo Argentina sidoo kale.
Waqtiga bandhiga: Ogosto 20-22, 2019
Goobta bandhigga: Sao Paulo, Brazil
Booth No .. 2 - 73
Wareegga bandhigga: sanadkiiba mar
South America International Cunnooyinka Cunnooyinka iyo Carwada Teknoolojiyadda (Fi E Hi 2019) waxaa soo qabanqaabiyey CMP Business Media oo ku taal Expo Center North ee Sao Paulo, Brazil Sida bandhig awood iyo xirfadeed ee warshadaha cuntada ee Koonfurta Ameerika, Fi South America iyo Hi South America Waxaa loo qabtay si kale, Fi iyo Hi waa la mideeyay.Xafladda waxaa wehelin doona CPHI SOUTH AMERICA, SOUTH American World Pharmaceutical Raw Materials Fair. Bandhigu waa mid ka mid ah alaabada ceeriin ee ceyriinka dawooyinka Latin America ugu weyn waxaana la qaban doonaa isla waqtigaas oo u dhig sida FISA, Bandhigga Wax-soo-saarka Cuntada Caalamiga ah ee Koonfurta Ameerika ee 2015 ee Brazil.
Isagoo daboolaya aag ka badan 20,000 mitir laba jibbaaran, Bandhigga Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee Brazil 2018 ayaa soo jiitay 11,255 xirfadlayaal booqdayaal ah, in ka badan 500 oo nooc oo cunto ah ayaa gacanta ku hayey si ay kor ugu qaadaan alaabtooda iyo teknoolojiyadooda cusub. iyagoo aaminsan in bandhiga uu la kulmay waxyaabihii ay ka filanayeen kaqeybgalka isla markaana ay gaareen natiijooyin lagu qanco. 94% ka mid ah ganacsatadu waxay rumeysnaayeen in bandhiggan uu u saamaxay inay ilaashadaan macaamiishooda hadda jira, inay horumariyaan toban jeer, ayna xoojiyaan aqoonsigooda, taasoo ka dhigaysa hab wanaagsan oo lagu dhiirrigeliyo shirkadaha.